फ्लाइओभरको अध्ययन गर्न जाइकासँग प्रस्ताव
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्वीकृत दिए मात्रै अध्ययन, पूर्वाधार विकासमा रू. ५९ करोड बजेट
काठमाडौं, ०८ श्रावण: ललितपुर महानगरपालिकाले फ्लाइओभर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)सँग प्रस्ताव गरेको छ । मेयर चिरीबाबु महर्जन र जाइकाका प्रतिनिधिबीच बिहीवार भएको भेटका क्रममा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो । महानगरले १ दशमलव ४ किलोमिटरको फ्लाइओभर निर्माणको योजना बनाएको छ, जसले पुल्चोकबाट कुपण्डोल हुँदै थापाथली जोड्नेछ । महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनका अनुसार त्यसबारे छलफल अगाडि बढेको छ । तर, स्थानीय तहहरूमा वैदेशिक सहयोग र परामर्शदाताहरूसँग कसरी र कुन निकायले समन्वय गर्ने भन्ने यकिन छैन । सोही कारण तत्कालका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने महानगरले बताएको छ । मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्रै जाइकाले फ्लाइओभरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पाउनेछ । महानगरका मेयर महर्जनले चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दा उक्त योजनासमेत समावेश गरेका थिए ।
यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा मोनोरेल सञ्चालन र फ्लाइओभर चौबाटो (इण्टरसेक्शन)लगायत वैकल्पिक मार्ग निर्माणबारे पनि छलफल भइरहेको महानगरले बताएको छ ।
महानगरले चालू आवका लागि पूर्वाधार विकास शीर्षकमा रू. ५९ करोड १५ लाख छुट्याएको छ, जसमा सडक स्तरोन्नति योजनाको अंश रू. १५ करोड छ । वातावरण र ढल व्यवस्थापन, सिँचाइ, वैकल्पिक ऊर्जा, सम्पदा संरक्षण, वडास्तरीय योजना, भवन मर्मत, पुललगायत कार्यक्रम महानगरले अगाडि सारेको छ । महानगरको कुल बजेट रू. ३ अर्ब २२ करोड ९१ लाख रहेको छ ।
China’s Belt and Road Initiative: Prospects and Pitfalls
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आठ लेनको बनाउने तयारी
स्वदेशी कम्पनीबाटै फास्ट ट्र्याक बनाउने सेनाको तयारी
प्रधानमन्त्रीले जेठ १४ गते काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक शिलान्यास गर्ने
नेपालमा रेल ल्याउन काठमाडौंको भन्दा चीनको चासो बढी
कालीगण्डकी करिडोर असारभित्रै
पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका लागि रूख काट्न अनुमति
नेपालमा यसकारण आवश्यक छ रोपवे
मानोरेल निर्माणका लागि विभिन्न पाँच कम्पनीले लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस